“गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर्” बोलमाया, जस्ता बहुचर्चित गीत गाएर प्रकाश कसरी बन्न पुगे करोडपति ? हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो – Khabar Patrika Np
“गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर्” बोलमाया, जस्ता बहुचर्चित गीत गाएर प्रकाश कसरी बन्न पुगे करोडपति ? हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: १६:०२:४०
गलबन्दी, बोलमाया जस्ता कालजयी र बहुचर्चित गीत गाएर करोडौँ रकम कमाएका लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुतले यिनै दुईओटा गीतबाट काठमाडौँमा भब्य बंगला किनेका छन् ।
गायन कलाबाट कोरोना कहरले विश्राम पाएका गायक यतिबेला घरमै विगत भन्दा बढी परिवार संग रमाईरहेका छन् । यसै क्रममा उनले आफ्नी छोरिको तस्विरलाई साझेदार गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्, सुत्केरीलाई तीन महिना पौष्टिक खाना खुवाइने